Archive du 23-juin-2021
CTC sy HOTEL HOPITAL Mpiasa 700 tsy nahazo karama 3 volana
Tsy nandray karama tao anatin'ny telo volana ny mpiasan'ny CTC teto Antananarivo, raha ny fitarainana nataon’izy ireo teny Ankatso omaly. Miisa 700 eo ho eo izy ireo.
CATALOGNE -ESPAGNE NAVOTSOTRA IREO MPITAKY NY FAHALEOVANTENA
Nankatoavin’ny governemanta Espaniola tarihin’ny Praiminisitra Pedro Sachez ny famoahana ireo mpitaky ny fahaleovantenan’i Catalogne miisa 9,
FRANCE METY HIOVA NY LOJIKAN’NY FIFIDIANANA 2022
Mampametra-panontaniana amin’ny mety ho kisarisarin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2022 ny fifidianam-paritra vao vita andro vitsy tany Frantsa.
Fiarahamonina feno fisalasalana ! Izay izany hatreto no azo hamintinana ny fiarahamonina naniry teto amin’ity firenena ity tao anatin’izay 2 taona sy tapany izay.
Jean Louis Rakotoamboa « Mbola betsaka ny babakotom-bazaha eto »
Miisa 5 ireo nosy an’ny Malagasy manodidina an’I Madagasikara, averiko ihany, hoy ny filohan’ny antoko politika Teza, Jean Louis Rakotoamboa,
Antananarivo Delestazy manara-penitra omaly
Maizin-kitroka ny tanàna saika nanerana Antananarivo omaly teo anelanelan’ny tamin’ny 9ora ka hatramin’ny 10 ora alina, nisy mbola taorian’izay aza vao tafaverina ny herinaratra. Ny nihoatra an’izay tsy ferana.
Annick Ratsiraka “Ny mpitondra no tompon’ny hevitra hitantanany ny firenena”
Vahiny manokan’ny Top Radio FM 102.8 Rtoa Annick Ratsiraka Sekretera Nasionalin’ny Antoko Arema omaly, niresaka lafin-javatra maro eto amin’ny tany sy ny Fanjakana.
Andry Rajoelina “Tsy mahavita mampiombona ny Malagasy”
"Malagasy miray hina sy miara-mientana ho amin'ny fitiavan-tanindrazana”, io no lohahevitry ny fanamarihana sy fankalazana ny faha-61 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara amin’ity taona ity.
Tale jeneralin’ny ACM Manao M.A.P eto an-toerana fa tsy any ivelany
Ny 20 jona lasa teo no namoahan’ny Minisitra sady depiote teo aloha Anthelme Ramparany tamin’ny tambajotra fa « Araka ny siosion-dresaka dia nalefa nitsoaka any Afrika Atsimo tamin’ny
Vaksiny Covishield 80% latsaka ny taham-pahombiazany
Mila manao vakisiny daholo isika Malagasy, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Teza omaly. Ireo marefo no tena tokony ho maika indrindra, hoy ny filohan’ny antoko,
Ambilobe-Ambanja Rongony maina 46 taonina sy voan-drongony 45 kg no tratra
Rongony lena 470.000 fototra, rongony maina 46 taonina, voan-drongony 45 kg nodorana, olona 27 voasambotra tany Analabe Distrikan’Ambanja sy Ambilobe.